ရေခဲသေတ္တာထဲရှိ MacBookPro | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ 2, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
မင်းပြောတာမှန်တယ်။ ကျွန်ုပ် MacBookPro နှင့်ပြသနာများမကြာခဏပြုလုပ်ပြီး၎င်းကို ပြန်လည်စတင်၍ မရပါ။ အဲဒီမှာထိုင်ပြီးဘာမှမလုပ်ဘူး ဒါဟာအတော်လေးစိတ်ပျက်စရာပါပဲ။ ငါကအပူထိန်းကိရိယာပြissueနာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသံသယဝင်လာတယ်။ ဒါနဲ့ငါစမ်းကြည့်တယ်၊ ငါကရေခဲသေတ္တာထဲမှာကပ်ထားတယ်။ ၁၀ မိနစ်ခန့်အကြာတွင်၎င်းကိုကျွန်တော်ထုတ်ယူလိုက်သည်။
ငါအကြိမ်အနည်းငယ်ဒီနည်းကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးအဲဒါကပြthat'sနာဖြစ်တယ်ဆိုတာအတည်ပြုခဲ့တယ် အခြားသူ၌ဤပြproblemနာရှိသလား။ ငါ့အလုပ်ကအသစ်တစ်ခုကိုမှာလိုက်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ညကကျွန်ုပ်ဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းရန်ကြိုးစားခဲ့သည် (ထို့ကြောင့်သင်ပို့စ်ကိုမတွေ့ရခြင်း) သို့သော်ကျွန်ုပ်၎င်းကိုအလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ စိတ်ပျက်စရာအကြောင်းပြောပါ!
ဒီတော့ဒီနေ့ငါ super-duper-mac-user ဖြစ်သူ Bill ဆီကနေငါဖိုင်တွေကိုကူးပြောင်းပြီးဒီနေမကောင်းတဲ့ MacBookPro ကိုဆရာဝန်ဆီခေါ်သွားနိုင်လားဆိုတာကြည့်ရအောင်။
Guy Kawasaki မှ ging ၀ ံဂေလိတရားကို Blogging
မေလ 2, 2007 မှာ 9: 14 AM
Doug ကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ငါမကြာသေးမီက Macbook မှာပန်ကာထိန်းချုပ်မှုပရိုဂရမ်တစ်ခုတပ်ဆင်လိုက်ပြီး၊ အပူဘယ်လောက်ပူလဲဆိုတာကိုငါမလိုချင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်အဲ့တာကိုထားလိုက်ပြီ၊ ဒါကြောင့်သူကပန်ကာကို 3500rpm အောက်ရောက်အောင်ဘယ်တော့မှခွင့်မပြုပါဘူး။ 1800rpm မှာပျင်းရိပေမယ့် CPU ပန်ကာကိုမဖွင့်ခင် ၆၅ စင်တီဂရိတ်လောက်တက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ အရမ်းမြင့်လွန်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် software က override ကိုခွင့်ပြုတယ်။ ငါ smcFanControl လို့ခေါ်တယ်ထင်တယ် သို့သော်လည်းငါသည်သင်၏ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းမယ့်စဉ်းစားကြဘူး🙂
မေလ 2, 2007 မှာ 10: 38 AM
ငါလည်း (ငါ SMC ပန်ကာထိန်းချုပ်မှုကိုသုံးသည်) ငါလည်းရိုက်ချက်တစ်ခုပေးခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်မကူညီခဲ့ပါ။ တကယ်တော့ MacBookPro ဟာအရမ်းပူလွန်းနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါဘယ်တော့မှ reboot မလုပ်ဘူး။ 🙂
မေလ 2, 2007 မှာ 12: 04 pm တွင်
Doug၊ Windows အခြေခံစက်တစ်လုံးသည် Mac အခန်းငယ်များ၏စိတ်ကူးတစ်ခုလုံးကိုသင်တစ်ချိန်လုံးပြန်လည်ဖွင့်ရန်မလိုပါဟုထင်ခဲ့သည်။
ငါ Mac ကိုကွန်ပျူတာတစ်လုံးလို့မပြောဘူးဆိုတာမင်းသတိထားမိလား။ အဘယ်ကြောင့်? နှစ်ခုလုံးသည် Personal Computer များဖြစ်သည်
မေလ 2, 2007 မှာ 12: 18 pm တွင်
… Mac ကို firewire mode နဲ့စတင်နိူင်မယ်လို့သင်ထင်တယ်၊ boot တက်နေစဉ် T key ကိုဖိထားပြီး။ ဖိုင်များကိုလွယ်ကူစွာလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။
မေလ 2, 2007 မှာ 12: 48 pm တွင်
ငါ foo ကြိုးစားနေတစ်ညလုံး! ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်မှာရပ်ပြီးဆက်မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ငါဒီညမနက်အိပ်ရာကထပြီး ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ Arrrgh!
ငါကြိုးစားမယ် ကာဗွန်မိတ္တူ Clone နောက်တစ်ခု!
မေလ 3, 2007 မှာ 2: 35 AM
သင်၏ Mac စာအုပ်တွင် hard-disk ပြproblemနာရှိနေသည်နှင့်တူသည်။
သင်ပြေးပြီးပြီလား မင်္ဂလာပါ? သင့်မှာ Mac ရှိရင်ကောင်းတဲ့ပရိုဂရမ် (သူတို့ဘာကြောင့် Apple ကိုမဝယ်သေးတာလဲလို့ကျွန်တော်မကြာခဏတွေးမိဖူးတယ်)
ဒါပေမယ့်စောင့်ပါ၊ ပြေးပါ ဦး Applejack သေး - ၎င်းသည်နေ့ကိုကယ်တင်နိုင်ပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည်။
မေလ 2, 2007 မှာ 11: 08 pm တွင်
Mac များအသုံးပြုရန်အလွန်ခက်သဖြင့်ဖိုင်များကိုတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ရွှေ့ပြောင်း။ မရနိုင်ပါ။ ဝိုး။ ဒါကတာပဲ
မေလ 3, 2007 မှာ 7: 23 AM
သူတို့တွေအားလုံးသုံးဖို့ခက်တယ်လို့မထင်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ငါလိုပဲဖျားနာတဲ့အခါသူတို့ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ကြဘူး! ဒီနေ့အက်ပဲစတိုးကိုသူတို့တွေ့နိုင်တာကိုကြည့်နေတယ်။